I-Ping S59 Iirons: Ukuhlaziywa kweClub Blade Golf Clubs
Iimpawu ze-Ping S59, ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba ngama-Ping S59 ngokuba zizona zixhobo ezinjenge-Ping ezenziwe xa zikhutshwa kuqala, zihlala ziwayo njengendlela esetyenzisiweyo namhlanje. Enyanisweni, nangona babonakala kuqala ngo-2003, uBubha Watson wayesesetyenzisiwe kwi- PGA Tour ngasekupheleni kuka-2013. Lelo xesha lidlulileyo kwihlabathi lezinto ezinkulu zokuvelisa igalufa.
I-thumbnail ye-Ping yenkcazelo yee-S59 yile:
Umgca ophezulu ophezulu, ukuguquka kwe-hoster, intloko ye-compact, kunye ne-cambered yedwa inika i-S59 umbala wendabuko obufunwa ngabadlali abangcono. I-S59 nayo ibonisa ibha yokuzinza emzimbeni, ivelise ukuva nokuqina komgama. "
Ukuthenga i-Ping S59 Iironi ezisetyenzisiweyo
Iibhola ze-S59 zihlala iqela elidumileyo kwi-market club. Unokufumana i-Ping ngokwayo isebenzisa iiseti ezisetyenziswa nge-Amazon. I-Ping (ngeli xesha lo kubhala) isabonelela ngeenqwelwana ezintsha ze- S59, kwakhona, kodwa ngokubamba: zineeklabhu zodwa, kwaye ukhetho lucacisiwe. Hlola ngesitolo sakho segalufa sasekuhlaleni ngokuyalela ukutshintsha i-S59 irons, okanye u tyelele i-ping.com.
Ngoku, ukuhlaziywa kwangaphambili esasishicilela kungekudala emva kwee-Ping S59 zithengiswa kwiimarike.
Ukuphononongwa: i-Ping S59 Irons
(Qaphela: Olu phengululo luye lwapapashwa ngoFebruwari 2004.)
Ukukhubazeka komhloli: 0
Iiklabhu ezithengwe kwi: Pro Shop
Iindleko: $ 800
Izithuba ze-Ping S59 Irons
Ukuvakalelwa kakuhle kwimpembelelo.
Ukuxolela kakhulu kwimishishini.
Unqabile kakhulu unomthwalo.
Ulawulo oluphambili lokupulela.
Iimpazamo zePing S59s
Ukuziqhenqa, kubonakala kungcono.
Ukudlala i-Ping S59 Irons
I-Ping yaziwa ngokuba iqela eliqinileyo elulula ukutshitshisa, kwaye uPing akazange adideke ngalezi zixhobo.
Lezi zixhobo ezinjenge-blade ezinokulinganisela okuphezulu kwedwa. Ukuvakala kakuhle kwizandla zakho, ukuxolela kakhulu kwimishishini, kulula ukusebenzela ibhola ekhohlo kunye nokunene. Ngokubanzi, iqela eliqinileyo.
Olu hlaziyo luyimveliso yohlobo lwangaphakathi lwamaPing S59 kunye ne-Mizuno MP33. Ekubeni ndadlala iimbonki zombini, ndandifuna ukunciphisa ukhetho kwaye ndamathele ngesinye seetoni. Ndichitha iintsuku ezintathu kwibala elibetha malunga neebhola ezili-1800 ukuze ndifanise.
Umgama : Idideyini yee-3-4 iiyure ezide kunye namacandelo e-Ping S59. Xa ndiqhuba, ndilahla iithagethi zam kunye ne-Bushnell yamashishini ama-500. Kwakungekho nantengano kumgama, njengoko i-S59 ngokucacileyo yayisisitya eside.
Inqwelo yebhola: Amatshini am a-S5 afika kunye ne-Ping Tour abasebenzi abazenzele imitshini yokubamba iqela ukuze benze i-flying ball engezantsi, kunye neendawo zokukhawuleza. Nangona ibhola yebhola yayincinci, ndiyabulela ngokwenene le iimfono njengoko zigcina i-ballflight eqhubekayo nakwii-mishits. Oku kwamangaliswa kum. I-MP33, kunye nokuziva kwabo kunye nokulawula kwabo, abazange bayenze kule nqanaba ehambelanayo - kungekudala. Nabo abadlali begalufu be-golf baqonda ukubaluleka kokuhambelana naluphi na iqela. Ukubambisana kwakha ukuzithemba kwizibhengezo zakho. Ndiza kushaya amaninzi amakhulu, adibanisa , ahlasele, ahlasele kunye neentsimbi kunye nesithende ukuvavanya ukuvakalelwa, ukuhambelana nokulawula kwezi zixhobo. Iqela liye laphulukana ngokuphawulekayo (ngenxa ye-off-center hits) kwiindawo ezininzi ze-clubface (ngaphantsi kwe-hock shank ).
Ukhangeleka : Khangela ukuba akunakucingela xa kufikelele ekusebenzeni, kodwa ukuba unomdla ojongene nokubukeka, ezi nkampani zinokuzijabulisa kakhulu. Isantya sesantya kwisigxina esingaphantsi sesithintelo asiyikuthandabuza (kutheni bangenza oku?). Ingeniso enesisindo kwimva yesinyithi ingaba ngcono. Kungakhathaliseki ukuba yinto engathandekiyo, le ntsimbi yenza kakuhle.
Njengentsimbi yesibini, ndiyakhathalela kakhulu ukubona ukuphucula okuqhubekayo kulo mzekelo. Nangona kunjalo, kukho into ekhethekileyo malunga nalezi zixhobo. Okokuqala, awufumani nayiphi na isethi seentengiso kwiimarike ezikhangeleka okanye uzive ngathi. Oku kuthetha okuninzi, ukuqwalasela imarike izaliswe ngokuphindaphindiweyo ngokubukeka, ukuziva, kunye nokusebenza.
Okwesibini, iiklabhu zePing zihlala zihlala zixabisa njengoko umenzi we-Ping engabonakali iimveliso zabo ngokukhawuleza ukukhukula kwiimarike kunye neendlela ezigqithiseleyo.
Oku kwenza ubume boshishino olufanelekileyo kwaye luguqulele kwixabiso elifanelekileyo kumnini wecandelo lePing.
I-Cleveland CG16 Irons Review
I-TaylorMade M1 Iiklabhu zeGolf
Indlela yokwenza isigqibo sokuba yiyiphi Ibhanti yeeKlabhu zeGalofu ezithengayo njengeGolfer yokuqala
I-24 (?) Iintlobo zeeThola zeTennis
Imbali yeZintetho zeTennis Racquets
Izibhotshi ze-Snow Men
Imfazwe Yomswaba eYurophu
Funda malunga nokufaka kunye nokuphuma kwi-C ++
Isizathu sokuba Ufanele ufumane i-PhD eKhemistry
Adreel University Admissions
Indlela yokukhetha iSikolo soBuchule beShishini
Uhlalutyo lwe-Doodle kunye nokuchazwa
Isifanekiso samahhala ekufundiseni abantwana bamaThere kunye neeNdawo zeeNdawo zeeNdawo
5 Imibuzo Yokuzibuza Ngaphambi kokufumana i-Tarantula yasePet
Ezi Ihotele zahluleka Ukukwenza Unqume Ukuba Uhlale Ekhaya
Imbali yePlymouth Colony
Ixesha eli-12 elininzi lokuxhamla kwi-Hip-Hop History
Isingeniso kwisivakalisi esidibeneyo
'Njengoko Uyakuthanda' Izihloko: Uthando
I-Enceladus: Ihlabathi leSitrity My Sattery
Kuphi Ukubukela Iimpawu ze-Intanethi kwi-Free
Ibhayisikobho yeBruce Lee
I-1 yeZiko loRhwebo lweZiko leeMidwebo kunye neMidwebo, ngo-2002 ukuya ku-2014
Iwebhusayithi YeSikolo Yenza Okubaluleke Kokuqala
Iifoto nemifanekiso yokuxhasa ukuqonda ukuFunda
U-Abraham Lincoln we-1863 isimemezelo sokubonga
I-Complete Complete Lyrics ethi 'Feliz Navidad' nguJoseph Feliciano
Iindaba eziBamkelekileyo zokuxolela
Umkhwa womtshato kwiYuda